SIDEE LOO HELI KARAA QURAAN - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Sidee looga takhalusaa quraanjada goobta
Dad badan, oo ku arkaya geed dab ka kalluumaysta, ha ka fiirsanina ilaa uu qaniinyo. Qodheerta beerta waxay keeni kartaa dhaawac aan loo baahnayn. Cayayaankaasi waa kuwa aan la marti-qaadin dhammaan meeraha, waxay si fiican u qabsadaan xaaladaha cimilada iyo si fiican u soo saari karaan. Qudhaantu waxay noqon kartaa midabyo kala duwan, sun ah ama aan lahayn, duulaya oo caadi ah.
Bayoolaji waxay udub dhexaad u tahay ficicides (Formicidae), si amar ah Hymenoptera, oo ay wehliyaan boodhadh, shinni iyo bumblebees.
Ma taqaanaa? Qudhaanjadu waxay ku nool yihiin "qoys" waxaana loo qaybiyaa qalab: "shaqaale" iyo "uur", sidaa darteed, uurku wuxuu ku noolyahay waqti ka badan shaqaalaha 2 jeer.
Noocyada lo'da ee ku nool beerta
Iyadoo bilawga kulaylka ah ee bannaanka u badan, beeralay iyo ubax growers ayaa ka welwelsan su'aasha: "Sida loo takhaluso quraanjada." In beerta waxaa sida caadiga ah laga helay anteenka madow (Lasius niger) - Mid ka mid ah wakiilada ugu yar ee noocyada ant, inta badan dhulka. Dhererka cayayaanka noocan oo kale ah waa 5mm ilaa 1 cm, sida caadiga ah, ilmo-galeenku wuxuu koraa 1 cm, halka xayiraadda shaqadu ay yar tahay. Noocyada noocan ah ee aphids waxay ku quusisaa meydadka cayayaanka, mararka qaarkood xayawaannada noocaas ah waxay weerari karaan xayawaan nool.
Mid kale oo ka mid ah noocyada ugu caansan ee ku nool qofku waa kan red mirimika. Qudhaanjadu waa midab casaan ah, oo qiyaastii 4-6 mm. Cayayaanka noocan oo kale ah waxay ku noolaan karaan keliya kiro, jardiinooyin ama kaymaha, laakiin xitaa dhismayaasha dhaadheer. Waxay isu yimaadaan qoysas ay hoggaaminayaan ilmo-galeenka. Waxay ku quudiyaan cayayaanka (nool iyo dhintay).
Ma taqaanaa? Hooyo casaan ah oo loo yaqaan "iligi macaan", naaneys ah, buqaaladahaan ayaa loo heley siideynta walxaha saliida leh ee sonkorta leh.
Noocyo kale oo qoob-ka-dhac ah ayaa inta badan la kulmay dhulkeena geedka keynta cas. Tani waa nooca nooca ah ee aan dhammaanteen ka baqeyno ilmanimada. Qudhaanyadani waa kuwa ugu weyn ee noocyada kala duwan ee ku yaal dhulkayaga, dhererkoodu wuxuu gaaraa 15 mm. Noocaankan sidoo kale waa midka ugu caansan: waxay ku dhisaan buulashooda dabaqyada cawska iyo cawska. Cayayaankaasi waa kuwo aad u xanuunsan, laakiin qaniinyada ma aha mid sumeynaya, haddii nabarka la maydho, ma jiri doonto wax raad raac ah maalin kadib. Daawada kaynta gaduudka cas ee lihi waxay ku qoran tahay Liiska Casaanka ee Noocyada Halista ah ee Buugga Caalamiga ah ee Ururka Caalamiga ah ee Ilaalinta.
Iyo siyaabaha loo maareynayo quraanjada, waxaan ka wada hadli doonaa maqaalkan.
Qodobada - faa'iidooyinka ama dhibaatada
Ka hor dhoobada quraaradaha ee goobta, waxaad u baahan tahay inaad fahamto: waxa faa'iidooyinka dhaxalka keena, iyo sida ay wax u yeeli karaan. Faa'iidada ugu weyn ee cayayaanka "nool" ee degaankaaga waa in ay ku quudiyaan cayayaanka beerta (xayawaanka, slugs, dirxiga, duqsigu). Waxaa sidoo kale muhiim ah in ants ah horumariyo aeration ee lakabka ciidda sare. Cayayaanka Kuwaas oo leh astaamahooda waxay kala diri karaan potassium iyo fosfooraska, taas oo kordhin doonta waxtarkeeda 2 iyo 10 jeer, siday u kala horreeyaan. Waxaa laga yaabaa in tani ay dhammaato faa'iidooyinka quraanjada. Aan ka sii hadalno dhibaatada. Qudhaanjadu aad bay u jecel yihiin macaan, sidaas darteed waxay soo jiidanayaan peonies, shuban, miraha.
Waa muhiim! Wixii ubaxyada ubaxyada ah, duullaanka qowlka ma aha mid culus, laakiin waxa fiican in aan loo oggolaan in ay tagaan burooyinkooda, sababtoo ah waxay bilaabayaan inay sixiraan digirta, iyo burka "dhinta" ka hor intaanay ubxin.
Inta badan, markaad qaadato strawberries, waxaynu ka helnaa quraanno badan oo ka mid ah duurka - taasina waa mid xun, maadaama ay ka dhisaan buulal halkaas oo tani waxay joojisaa kobcinta miraha. Qudhaannada nijaaradu waxay geedka khudradda u jecel yihiin boodhka muddo sannad ah, sidaas darteed haddii aad ku aragtid dhagaxyada dhirta geedaha, isla markiiba ka takhalus. Qudhaanjadu waxay isku keenaan aphids iyaga, kuwaas oo kufsi geedka. Sidaa darteed, ilaalinta geedaha ka dhanka ah quraanjada waa in sidoo kale ku jiraan ilaalinta ka dhanka ah aphids.
Sidee looga takhalusi karaa ats ats daawada dad
Qaababka dadweynaha ee wax ka qabashada dhirta beerta waxaa loo gudbiyaa jiil ilaa jiil, tani ma saameynayso waxtar yar. Habka ugu horeeya ee ugu fudud waa inaad qodo meesha aad ka aragtay cayayaanka. Si saameyn wanaagsan, qodaya dhulka, waxaad ku dari kartaa lime, ash ama ash. Haddii haraaga dabiiciga ah la burburiyo, markaa dib uma arki doontid cayayaanka. Habka labaad ee "ayeeyo" ayaa ah in la jarjariyo toon, basbeel, iyo dhir meelo ay ku yaallaan aalkolada - cayayaankaasi ma jecla urka adag.
Su'aalaha sida joogtada ah loo waydiiyo: "Sidee loo burburiyaa astamaha gudaha dalka"? Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan. Mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan - ku shub biyo karkaraya anthill ama kerosene. Waxa kale oo aad ku rushaysaa ash ama ku shub sarax sulfuric acid.
Waa muhiim! Markaad la shaqeyneyso aashitada waxay ka fiican tahay inaad isticmaasho neefsashada iyo gacmo gashi.
Daaweyn fiican ayaa ah "qadhaadh macaan": qayb ka mid ah khamiirka la qasi jiray biyo qabow ilaa inta joogtada ah ee kareemka qaro weyn, ku dar macaanka yar yar ee isku dar ah iyo ku faafay meelaha cayayaanka.
Caadi ahaan waxay ku dhacaan weeraro iyo geedo midho leh. Si aad uga takhalusto kiiskan, waxaad ku buufin kartaa xalka geed: 1 qayb oo biyo ah iyo 1 qayb oo ah ammonia oo dareere ah. Haddii aad leedahay ido jir ah - waxay sidoo kale noqon kartaa caqabad ku jirta habka cayayaanka. Waa in la jarjaraa oo la duuduubaa geedaha iyo duurka dhererkoodu yahay 15-20 cm, saamayntuna waxay noqonaysaa mid fiican haddii dhogorta lagu daaweeyo carbolic acid.
Hababka kiimikada ee wax ka qabashada dhirta
Haddii aad hore u tijaabisay dhammaan walxaha dabiiciga ah oo aanad garanayn sida looga takhaluso qurxinta madow ee beerta, ka dibna waa inaad u jeesataa sida kiimikada. Ha iloobin xaqiiqda ah in miisaaniyaddu aysan haysanin "saamayn" weligeed, iyo si dhakhso ah ama waqti dambe ayada ayaa soo noqonaya.
Waa muhiim! Markaad isticmaasho difaaca kiimikada, waa inaad raacdaa tilmaamaha si taxadar leh si aad uga fogaato saameynta xun ee kiimikada geedka.
Hababka ugu waxtarka badan ayaa la aqoonsaday: "Thunder-2", "Muracid", "Delocia" iyo "Anteater".
Xabbad-2 waa mid ka mid ah habka ugu caamsan, inkastoo ay khatar ugu tahay dadka iyo xayawaanka. Haddii kiimikadaan ay galaan kaydka, markaas kalluunka wuxuu bilaabaa in uu dhinto. Caadi ahaan qalabka ayaa la dhigaa meelo ay ku yaallaan aaladu, oo ay ku rusheeyeen carrada cusub dusha sare.
"Anteater" - diyaarinta dareeraha. Waxaa lagu baddalay saamiga 1:10 iyo waraabinta meesha ay ku yaalliin quraanjada.
"Muracid" - sidoo kale daaweynta dareeraha ee quraanjada beerta, laakiin inta badan waxaa la buufin ama ku darsaday si ay u. Si aad u diyaariso qashinka "Murakid" waxaad u baahan tahay 100 g oo biyo ah ku dar 100 g oo sonkor ah iyo 20 g oo malab ah. Isku daadi isku dhafka meelaha ay cayayaanka ku nool yihiin.
"Delicia" - daaweynta budada Jarmalka. Waxaa loo isticmaali karaa 2 nooc: sida budo, duufaan, dabacsan iyo cayayaanka "socodka", iyo xal: 10 g oo budo ah halkii 5 l oo biyo ah. Xalkani wuxuu qaban karaa labada dogab iyo dhulka.
Ma taqaanaa?Daaweynta ugu ammaansan waa "Anteater", maadaama aysan saameyn ku yeelanaynin micno-mareenada faa'iidada leh ee ku nool carrada.
Si ay ujiraan maaha in ay weeraraan beertaada, beerta xagaaga ama beerta ubaxa aan la fileynin, waa inaad ka hortagtaa muuqaalkeeda adoo daaweynaya gooyooyinka dhirta oo leh xal biya ah iyo dareeraha dareeraha ah ee leh qorraxda ugu horeysa ee qorraxda iyo budada qubeyska leh ee jiilaalka.